Ko Mg Hla, I cannot write in Burmese. Anyway, I really like your pictures. It remind me my years in RGN. But it miss somethings in your pictures. You know what I mean...May Ko Mg Hla happy and enjoy your creative work!
ပုံတွေကြည့်ပြီး မြန်မာပြည်ကြီးကို လွမ်းမိတယ် .. ကိုမောင်လှရေ .. မန္တလေးတစ်ခွင်က ပုံလေးတွေလည်းလုပ်ပါအုံး .. ဖြစ်နိုင်ရင် ဘယ်သူမှ ရိုက်မတင်သေးတဲ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ရဲ့ ရသတွေကို ဖော်ဆောင်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေ တင်စေချင်ပါတယ်။ လက်ဘက်ရည်ဆိုင် မရှိတဲ့ နိုင်ငံကနေ .. မန္တလေးက လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွေကို သတိရတယ် ဗျာ။
ဟဲ့ anonymous ရဲ့ ဒီဘလော့ခ် က နိုင်ငံရေး လုပ်နေတဲ့ ဘလော့ခ်မဟုတ်ဘူး။ သူ့ဘာသာသူ ပါဆင်နယ် တင်ချင်တာတင်မယ်။
irresponsible ဖြစ်တယ် ပြောရအောင် နင်က ဘာမို့လဲ။ ဒုက်ခ..။ ပြောချင်လဲ နာမည် အရင်းနဲ့ဝင်ပြော
အေးလေကွယ်...။ ဘယ်လိုက ဘယ်လို အမည်မသိ ရှေးစာဆို နာမည်ကြီးနဲ့ လာကောနေတာတုန်း။
ဗိုလ်ချုပ်ပန်းခြံသွားတယ်ဆိုပြီး အဓိက ပုံတွေကျတော့ ပါမလာဘူး။ ဘယ်ပုံတွေရှိရမလဲ ... အတွဲတွေပုံတွေပေါ့ ... အဲ ... အဲလေ ယောင်သွားလို့ ... ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ပုံကြီးကျတော့ မရိုက်ခဲ့ဘူးလို့ ပြောတာပါဗျာ။ ဟီး ... ပြီးတော့ အရှေ့က သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာဝန်ကြီးရုံး ရှေ့တည့်တည့်က ပန်းပုရုပ်ကြီးလဲလှတယ်။ သင်္ကြန်မှာ ရေလောင်းနေတဲ့ပုံလားမသိဘူး။ သေခြာတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။
အနော်လဲ မန်းလေးသူဗျ မန်းဘလော့ဂါတွေကိုတော့ ရန်ကုန်ရောက်တဲ့ ကိုမောင်လှကိုတောင် အပြင်မှာ မတွေ့ဖူးဘူးဗျာ
အခြေအနေပေးရင် လာတွေ့ပါ့မယ် ခင်ဗျာ...